WTTC: Njem azụmahịa ga-eru ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ọkwa ọrịa tupu ọrịa 2022
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » WTTC: Njem azụmahịa ga-eru ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ọkwa ọrịa tupu ọrịa 2022
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
A na-atụ anya na mmefu njem azụmahịa ga-eru ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ọkwa tupu ọrịa ọrịa na 2022.
Dabere na akụkọ ọhụrụ ahụ, mmụba dị ntakịrị maka njem azụmahịa na njem azụmahịa zuru ụwa ọnụ na-emefu 26% n'afọ a ga-esochi ịrị elu nke 34% na 2022.
COVID-19 emetụta njem azụmahịa n'ụzọ na-ezighi ezi ma jiri nwayọ maliteghachi.
Ọ dị mkpa ka ndị niile na-etinye aka na-ejikọta aka iji chọta ngwọta maka enyemaka mgbake njem azụmahịa.
Azụmahịa njem azụmahịa kwesịrị ịhazigharị ụdị ego ha ga-enweta, gbasaa elekwasị anya na mpaghara yana melite ọrụ dijitalụ.
Ego mmefu njem azụmahịa n'ụwa niile yiri ka ọ ga-ebili ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ n'afọ a wee rute ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ọkwa ọrịa butere tupu 2022, ka akwụkwọ akụkọ kwuru. World Travel & Tourism Council (WTTC).
Amụma ahụ na-abịa na nnukwu akụkọ WTTC ọhụrụ yana mmekorita ya na McKinsey & Company akpọrọ 'Adapting to Endemic Covid-19: Outlook for Business Travel'.
Ọ na-adọta na nyocha, nyocha na ajụjụ ọnụ miri emi nke ndị isi azụmaahịa njem & njem nlegharị anya iji mee ka òtù dị iche iche kwadoo maka njem ụlọ ọrụ na ụwa mgbe ọrịa ahụ gasịrị.
COVID-19 emetụta njem azụmahịa n'ụzọ na-ezighi ezi ma jiri nwayọ maliteghachi. Nyere na njem azụmahịa dị oke mkpa maka ọtụtụ akụkụ nke akụ na ụba ụwa, ọ dị mkpa ka ndị niile na-etinye aka na-ejikọta aka ịchọta ngwọta iji nyere aka mgbake ya.
Mana nke a na-abịa na ndakpọ 61% na njem azụmahịa na-emefu na 2020, na-esochi mmachibido iwu njem buru ibu yana nnukwu ọdịiche mpaghara na nlọghachi azụ gburugburu ụwa.
Iji mee ka mgbake nke njem azụmahịa dị ngwa, akụkọ ahụ na-atụ aro ka ụlọ ọrụ achụmnta ego gbanwee ụdị ego ha ga-enweta, gbasaa nlebara anya mpaghara, ma melite ọrụ dijitalụ.
Ihe ịma aka nke iweghachi njem azụmahịa ga-adaberekwa na mmekorita na mmekorita na-aga n'ihu na mpaghara nzuzo na nke ọha na ịzụlite mmekọrịta ọhụrụ.
Julia Simpson, WTTC CEO & Onye isi ala, kwuru, sị: “Njem azụmahịa na-amalite ibuli. Anyị na-atụ anya ịhụ ụzọ abụọ n'ụzọ atọ azụ na njedebe nke 2022.
"Ebutela njem azụmahịa nke ukwuu mana nyocha anyị na-egosi ohere maka nchekwube na Asia Pacific na Middle East na mbụ na mbido."
N'ịtụle afọ a na nke na-abịa. WTTC data na-egosi mpaghara ndị dị gburugburu ụwa na-eduga ntute na njem azụmahịa, nke Middle East na-edu:
Middle East - A na-atụ anya mmefu azụmahịa ga-ebili site na 49% n'afọ a, siri ike karịa mmefu ntụrụndụ na 36%, na-esote 32% ịrị elu n'afọ ọzọ
Asia-Pacific - A na-atụ anya mmefu azụmahịa ga-ebili site na 32% n'afọ a, yana 41% n'afọ ọzọ
Europe - Tọọ ibili site na 36% n'afọ a, siri ike karịa mmefu ntụrụndụ na 26%, na-esote 28% ịrị elu n'afọ ọzọ
Africa - A na-atụ anya na mmefu ga-ebili site na 36% n'afọ a, dị ike karịa mmefu ntụrụndụ na 35%, na-esote 23% ịrị elu n'afọ ọzọ
Americas - A na-atụ anya na mmefu azụmahịa ga-ebili site na 14% n'afọ a, yana site na 35% na 2022.
Nkwupụta ahụ kọwara etu mmefu metụtara njem mba ụwa si agbada nke ọma site na 2019 ruo 2020, n'ihi COVID-19 na mmachi na-aga n'ihu na njem mba ụwa.
N'afọ gara aga, ngalaba njem na njem nlegharị anya nwere mfu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri US $ 4.5, ihe karịrị nde mmadụ 62 tụfuru ọrụ ha. Ego ndị ọbịa na-emefu n'ime ụlọ belatara pasenti 45, ebe mmefu ndị ọbịa nke mba ụwa dara site na 69.4% a na-enwetụbeghị ụdị ya.
Akụkọ WTTC gosikwara mgbanwe dị ukwuu n'ime ọnwa 18 gara aga, ọkachasị n'ọchịchọ, ọkọnọ na gburugburu ebe ọrụ na-emetụta njem azụmahịa.
Achọ maka njem azụmahịa ejirila nwayọọ gbakee karịa ntụrụndụ na amụma ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-emetụta ọchịchọ njem azụmahịa dịka mmachi njem mba.
Ọrịa COVID-19 abụrụla ihe na-akpalite mgbanwe, na-ebuga ịkwaga na dijitalụ wee gbanwee ọkọnọ maka njem azụmahịa enwere ike dị ka mmemme ngwakọ ghọrọ ụkpụrụ ọhụrụ.
Gburugburu ebe a na-arụ ọrụ abụrụla nke na-adịghị ahụkebe na mkpa ka ukwuu maka idoanya gburugburu iwu na ụkpụrụ dị mkpa iji kwe ka njem mba ụwa na-enweghị mgbochi.
Agbanyeghị, ụfọdụ ngalaba agaala nke ọma karịa ndị ọzọ nwere mmalite mmalite nke gụnyere nrụpụta, ọgwụ na ụlọ ọrụ ihe owuwu ebe ndị na-ahụ maka ọrụ na ụlọ ọrụ ihe ọmụma gụnyere ahụike, agụmakwụkwọ, na ọrụ ndị ọkachamara nwere ike ịnwe ọgba aghara ogologo oge.
Akụkọ ahụ na-ekwusi ike mkpa njem azụmahịa na-aga n'ihu na mmefu ọ na-akpata maka uto akụ na ụba ụwa.
Nnyocha na-egosi na n'afọ 2019, ọtụtụ mba ndị bụ isi dabere na njem azụmahịa maka 20% nke njem ha, 75 ruo 85% bụ nke ụlọ.
Ọ bụ ezie na njem azụmahịa nọchiri anya naanị 21.4% nke njem zuru ụwa ọnụ na 2019, ọ bụ ya kpatara mmefu ego kachasị elu n'ọtụtụ ebe, na-eme ka ọ dị mkpa maka mgbake nke mpaghara njem niile yana maka ọtụtụ ndị na-emetụta ya.
Njem azụmahịa bụ akụkụ dị mkpa na-enye ọrụ maka ụgbọ elu na ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị elu yana ihe dị mkpa maka ịmepụta ọtụtụ ego ha nwetara.
Tupu oria ojoo a, njem achụmnta ego ruru ihe dị ka 70% nke ego ha nwetara n'ụwa niile maka agbụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị elu ebe n'etiti 55 na 75% nke uru ụgbọ elu sitere n'aka ndị njem azụmahịa, bụ ndị mejupụtara ihe dịka 12% nke ndị njem.
Jane Sun, onye isi ndị isi nke Trip.com, kwuru, sị: “Na China, njem azụmahịa na-abawanye ngwa ngwa. Azụmahịa njem ụlọ ọrụ Trip.com Group bụ n'ezie otu n'ime akụkụ anyị na-eto ngwa ngwa, yabụ ndị mmadụ ka kwesịrị ịhụ ibe ha ka ha na-azụ ahịa ma mechie azụmaahịa. Anyị na-ekwusi ike na ozugbo azụmaahịa laghachiri na nkịtị, anyị na-atụ anya ka uto siri ike ma e jiri ya tụnyere ọkwa mbụ COVID. ”
Chris Nassetta, Onye isi ala & Onye isi ala Hilton kwuru, sị: “Nlaghachi na njem azụmahịa ga-adị oke mkpa na mgbake ụlọ ọrụ anyị na ọrịa a.
"Anyị na-aga n'ihu na-ahụ ọganihu na-arịwanye elu na akụkọ a na-egosi nnọọ otú njem azụmahịa si dị mkpa maka akụnụba ụwa. Njem njem na njem nlegharị anya ga-aga n'ihu na-ebute ọganihu maka nde mmadụ gburugburu ụwa - ọkachasị ka ndị mmadụ na-amalite njem ọzọ. "
WTTC kwenyere na njem azụmahịa ga-alọghachi, mgbake ya na-enweghị isi ga-enwe mmetụta dị mkpa n'ofe njem njem & njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ, na-eme ka mmekọrịta ọha na eze nkeonwe bụrụ ihe dị mkpa na ọnwa na afọ ndị dị n'ihu.